Tsy hohelohina na hotsaraina akory
"(Hoy Jesosy:) Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hohelohina; fa tafafindra niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana izy. " Jaona 5:24
Samy hafa ny hevitry ny hoe fitsarana sy fanamelohana. Ny fitsarana dia mialoha ny mety ho fanamelohana. Ny fitsarana resahin’ny Baiboly amintsika dia ilay fisehoan’ny tsirairay amin’ny maha voampanga azy, eo anatrehan’Andriamanitra. Ny fanamelohana dia ilay didim-pitsarana, tsy iverenana intsony, tsy azo ivalozana satria Andriamanitra no manonona azy.
Ny mpino izay nateraka indray dia hiseho eo anatrehan’ny fitsaran’i Kristy, nefa tsy toy ny voampanga hotsaraina. Mifanohitra amin’izany, hiseho toy ny efa novotsoran-keloka izy, ary ambonin’izany, toy ny marina, satria efa voavela ny fahotany. Hampandalovina eo anatrehany ny fiainany manontolo, tarafin’ny fahamasinan’Andriamanitra sy ny fahasoavany. “Isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin’ny fitsaran’i Kristy, mba handraisan’ny olona rehetra izay zavatra nataon’ny tenany, dia araka izay nataony, na tsara na ratsy” (2 Korintiana 5:10).
Koa dia tsy hotsaraina mihitsy ny mpino, na noho ny toetra ratsiny na noho ireo fahotany. Fa iza moa no nanao fanambarana toy izany? Ilay Mpitsara fara tampony! (Jaona 5:22). Hoy Jesosy: “Izay mandre ny teniko ka mino Izay (Andriamanitra) naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hohelohina”.
Satria Jesosy fanati-panonerana ny ota, dia “nitondra ny fahotantsika tamin’ny tenany teo ambonin’ny hazo” (1 Petera 2:24). Afahany tsy misy fitsarana ireo olona anton’ny nanolorany ny ainy. “Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy” (Romana 8:1). Manana antoka isika mpino fa tsy hohelohina na hotsaraina akory, na ankehitriny na amin’ny hoavy.